Cadayga Industry - Shiinaha Shandong Yulong cellulose
Cadayga Industry CMC waxaa loo isticmaalaa sida daro adag in cadayga si looga hortago kala adag-dareeraha ah ee lagu cadaydo, taas oo ka dhigaysa cadayga uu leeyahay ku nafwaayay gaar ah oo joogta ah iyo Jinka waa macaan oo wanaagsan, oo waxay hagaajinaysaa dhadhanka daawada ilkaha. In lagu cadaydo, noocyo kala duwan oo electrolytes cusbo waxaa sida caadiga ah lagu daray, iyo dulqaadka cusbo of CMC ku ool ah looga hortagi karaa elektrolytka ka dhaawac ku nafwaayay koollada, khafiifiya iyo kala adag-dareere ah. CMC leeyahay pseudop wanaagsan ...
CMC waxaa loo isticmaalaa sida daro adag in cadayga si looga hortago kala adag-dareeraha ah ee lagu cadaydo, taas oo ka dhigaysa cadayga uu leeyahay ku nafwaayay gaar ah oo joogta ah iyo Jinka waa macaan oo wanaagsan, oo waxay hagaajinaysaa dhadhanka daawada ilkaha.
CMC leeyahay pseudoplastic wanaagsan oo faa'iido u leh kor u qaadista heerka wax soo saarka ee lagu cadaydo. Waa dheeraad ah oo ku habboon in la tuuji marka aad isticmaasho.
Nooca warshadaha daawada cadayga: TM9, TH9, TH10 iyo TVH9
Next: Industry Macdanta